घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई ताजा समाचार » २ अधिक महिना को लागी हवाई को लागी प्रतिबन्धित यात्रा
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • स्वास्थ्य समाचार • HITA • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • समाचार • रिसोर्ट्स • सुरक्षा • पर्यटन • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
हवाई यात्रा प्रतिबन्ध
यो हवाई गभर्नर डेभिड Ige बाट पर्यटकहरु को लागी एक छुट्टी को लागी द्वीपहरु मा आउन को बारे मा सोच्ने को लागी एक मानक मन्त्र बन्ने छ - कृपया तपाइँको यात्रा योजनाहरु लाई ढिलाइ गर्नुहोस्।
हवाई गभर्नर को अनुसार आज, यात्रा नियम कम्तिमा अर्को दुई महिना को लागी ठाउँ मा रहनेछ।
हवाई अत्यधिक संक्रामक डेल्टा भेरियन्ट को कारण नयाँ केसहरु र मृत्यु को मामला मा धेरै उच्च COVID-19 संख्या संग संघर्ष गरीरहेको छ।
जो अझै पनी हवाई मा आउँछन्, उनीहरु लाई टीकाकरण को प्रमाण वा एक नकारात्मक COVID परीक्षण को नतिजा हवाई मा आइपुगेको hours२ घण्टा भित्र देखाउनु पर्छ वा १० दिन क्वारेन्टाइन को सामना गर्नु पर्छ।
गभर्नरले साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै Aloha राज्य, र विगत केहि हप्ता को लागी, उनको निवेदन उस्तै छ - पर्यटकहरुलाई पछि हवाई यात्रा गर्न को लागी पर्खन को लागी सोध्दै।
अहिले हवाई ठाउँमा आपतकालीन आदेश छ कसरी यात्रा सञ्चालन गरिन्छ विनियमित गर्न को लागी जब हवाई जाँदै, र राज्यपाल प्रति आज, ती नियमहरु कम्तीमा अर्को दुई महिना को लागी ठाउँ मा रहनेछन्।
हवाई धेरै नयाँ संक्रामक डेल्टा भेरियन्ट को कारणले नयाँ केस र मृत्यु को मामला मा धेरै उच्च COVID-19 संख्या संग संघर्ष गरी रहेको छ। यो एक दिन मा दोहोरो अंक मृत्यु गणना देख्न असामान्य छैन। होनोलुलु मुर्खले सम्पत्तीमा ३ रेफ्रिजरेटेड कन्टेनर राख्नु परेको थियो ताकि उच्च संख्यामा प्राप्त हुने शवहरु लाई समायोजित गर्न को साथै COVID बाट पारित भएकाहरुलाई समात्न को लागी, जुन अहिले ती मध्ये धेरै हो।
गभर्नर इगेले बताउनुभयो कि नयाँ दैनिक केसहरुको सात दिनको औसत ३०० भन्दा धेरै रहेको छ। संख्याहरु कोभिड १ first को पहिलो उपस्थिति भन्दा डरलाग्दो ढंगले धेरै छन्। यस बर्ष अगस्ट मा एक बिन्दु मा, त्यहाँ एकै दिन मा लगभग new ०० नयाँ केस दर्ज गरीएको थियो।
तब देखि, हवाई एक ठाउँ मा जम्मा गर्न सक्ने मानिसहरु को संख्या संगै साथै एक पटक मा एक प्रतिष्ठान मा कति खाना खान सक्छन् को संख्या मा शासन गरेको छ। पर्यटकहरु को लागी, यो रेष्टुरेन्टहरु मा लामो लाइनहरु को मतलब छ, र खाना प्रस्ताव गर्ने धेरै ठाउँहरु मात्र पिक अप को लागी त्यसो गरीरहेका छन्।
हवाई का लेफ्टिनेन्ट गभर्नर जोश ग्रीन, जो एक ईआर डाक्टर पनि हो, एक ईगल को आँखा संग अस्पताल भर्ना संख्या देखी रहेको छ। उनले चाँडै औंल्याए कि ती मध्ये धेरै जसो अहिले COVID बिरामीहरु को रूप मा अस्पताल मा भर्ना छन्, खोप नलागेकाहरु हुन्। तथ्या shows्कले देखाउँछ कि कोभिड को लागी अस्पताल मा उपचार को लागी आवश्यक पर्नेहरु मध्ये लगभग% ०% ले कुनै खोप प्राप्त गरेनन्, र त्यो प्रतिशत दिन प्रति दिन लगातार रहन्छ।
अहिले, भित्री सार्वजनिक स्थानहरुमा मास्क लगाउनु अनिवार्य छ, र एक खाना प्रतिष्ठान मा प्रवेश गर्न को लागी कि खाना मा वा बस उठाउन को लागी, एक गर्न को लागी एक पूरा खोप कार्ड देखाउनु पर्छ।
यस तथ्यको बावजुद कि हवाई झुण्ड मानसिकता प्राप्त गर्न को लागी एक पटक उच्च सम्मानित 70% टीकाकरण दर नजिकै छ - वर्तमान मा 68% मा - गभर्नर अब यो सीमा पार गर्न को लागी मार्कर को रूप मा प्रतिबन्धहरु लाई ढिलो गर्न को लागी देख्दैनन्। डेल्टा रूपहरु अत्यधिक संक्रामक प्रकृति बनाउँछ कि एक पटक ऐतिहासिक लक्ष्य अब नगण्य छ।
सबैभन्दा ठूलो चिन्ता स्वास्थ्यकर्मीहरु र अस्पतालहरु को लागी हो जो सामान्य स्थिति भन्दा बाहिर तेस्रो बर्ष मा जाँदैछन्। कर्मचारीहरु धेरै काम गरीरहेका छन् र COVID बिरामीहरु को लागी उपलब्ध बेड को संख्या लगातार निगरानी गर्नु पर्छ ताकि अस्पतालहरु अझै पनी बिरामीहरु को अन्य प्रकार को चिकित्सा हेरविचार को आवश्यकता स्वीकार गर्न सक्छन्।
जो अझै हवाई को यात्रा गर्ने निर्णय को लागी, उनीहरु खोप को प्रमाण वा एक नकारात्मक COVID परीक्षण परिणाम हवाई मा आइपुगेको hours२ घण्टा भित्र देखाउनु पर्छ वा १० दिन क्वारेन्टाइन लगाइनेछ।
रोशेल Shankle भन्छन्:
अक्टोबर 4, 2021 मा 18: 34
"झुण्ड मानसिकता" हु? यो एक Freudian पर्ची हो? सम्पादकहरु मा आउनुहोस्, हामी अझ राम्रो गर्न सक्छौं।
अक्टोबर 4, 2021 मा 06: 11
म एक हवाई निवासी हुँ र जहाँ सम्म मलाई थाहा छ, ग्राहकहरु जो मात्र रेस्टुरेन्टहरु बाट अर्डर उठाउँदै छन् भ्याक्सिन कार्ड वा नकारात्मक परीक्षण नतिजा देखाउन को लागी छैन।
त्यो मात्र पाहुनाहरु मा खाना को लागी लागू हुन्छ।
म एक किराना पसल मा एक डेली संग काम गर्दछु र म पनि अंशकालिक किराना र खाना वितरण गर्छु।